I-Paramount ibuyela umva kwaye iyila kwakhona i-Sonic ye-movie yayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Sele sixoxe nge Akumangalisi ukuba kukufumana u-Sonic ohluphekileyo ikhulelwe kakubi kwaye yenzelwe ukugqitha kwi-cinema. Injalo ke into yokugxekwa efunyenweyo, yokuba iParamount ithathe isigqibo sokuyila kwakhona.
Ungasithatha njani isigqibo, ukulungisa kububulumko Kwaye nangona, ngokuqinisekileyo, oku kubuyela umva kumchithele imali kwiindleko zoqoqosho, ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukuxhamla kuyo xa ekwazi ukuzisa uhlengahlengiso kwakhona lwe-Sonic oluya kubhenela kubalandeli abanzima bokufa. abalinganiswa bomdlalo wevidiyo abathandekayo kubo bonke.
Konke kwenzeka nini I-Paramount ikhuphe i-trailer yeSonic IHedgehog ngoLwesibini odlulileyo (Naxa sele sibonile uyilo lwangaphambili lomlinganiswa ongathandanga kwanto). Into emayithethwe kukuba ifumene ukugxekwa okukhulu kangangokuba inkampani kuye kwafuneka ibhengeze ukuba baya kuyila ngokutsha uSonic ohlwempuzekileyo ongenatyala.
Ingxaki ngo-Sonic iHedgehog uyilo lomlinganiswa kaSonic. Kufuneka kuthiwe akukho lula ukuzisa ukuba yintoni umlinganiswa womdlalo wevidiyo ingaba yintoni imovie yescreen esikhulu. Besingayi kuba kwixesha lokuqala ukuba ukugqabhuka komlinganiswa onje kwiscreen esikhulu kugxekwe kakhulu, kodwa inyani kukuba ngeli xesha abakhange babethe amanqaku ukuzama ukwanelisa abalandeli.
Amazinyo abantu, looomehlo nomzimba ongaqhelekanga, ukuba ungabona apha kwimifanekiso yokuqala esiyifumanayo, ngokungathi wayengumntu, abancedi abalandeli ukuba batsaleleke kumfanekiso onikwa nguSonic kwiscreen esikhulu. Ke kufuneka silinde ukuba iphinde yenziwe ngokutsha nazo zonke iindleko eziza kuthatha ukuyibuyisela kwifilimu yokugqibela. Siza kubona ukuba izigqibo ezenziwe zilungile ukuze kungekudala sikwazi ukubona i-trailer kwaye sizive ukuba siza kubona uSonic ngokwenene.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-Paramount ithathe isigqibo sokuyila kwakhona i-Sonic ngaphambi kokufunyanwa kokugxekwa